दैलेख जिप दुर्घटनाः मृतकको संख्या ६ पुग्यो (अपडेट) - Everest Dainik - News from Nepal
दैलेख जिप दुर्घटनाः मृतकको संख्या ६ पुग्यो (अपडेट)
सुर्खेत, मंसिर १२ । आज (बुधबार) बिहान दैलेखमा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ ।
जिप दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ८ जना मध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घनामा २ जना घाइते छन् । सुर्खेतबाट दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–३ का लागि छुटेको भे १ च २२०७ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटना भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस दार्चुला जीप दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा समवेदना
मृत्यु हुनेमा ठाटीकाध गाउँपालिका १ का ३० वर्षीया निर्मल बम, ३ का ४० वर्षीय राजेन्द्र बहादुर शाही, ४ की रत्ना शाही, चालक रमेश शाही, वडा न‌ं. ३ का २६ वर्षीय दिलिप शाही र सोही गाउँपालिका वडा न‌ं. १ का समशेर पुन रहेको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस दैलेख जिप दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो (अपडेट)
क्षेत्रीका अनुसार घाइते २ जनाको दुल्लु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
जिप सडकदेखि करीब ५० मिटर तल खसेको थियो। वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही लगाएतको टोली घटना पुगिसकेको छ।
ठाँटिकाँध प्रहरी चौकीको प्रहरी टोली र गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीलगायतको टोली घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको बताइएको छ । हालसम्म दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भोजपुरमा जिप दुर्घटनाः ११ घाइते, तीनजना गम्भीर घाइते
ट्याग्स: dailekha, Jeep Accdent